सातै प्रदेशमा कस्तो छ प्रदेश सभाको तयारी? - Awajonline Online Newspaper
सातै प्रदेशमा कस्तो छ प्रदेश सभाको तयारी?
आवाज संवाददाता १७ माघ २०७४, बुधबार
प्रदेश नम्बर १ को सभाको पहिलो बैठक सोमबार बस्दै छ। तर, बैठकस्थल मोरङ जिल्ला समन्वय समितिको हल अझै अस्तव्यस्त छ। सभामुख बस्ने ड्यास बनाउनेदेखि सांसद बस्ने कुर्सी मिलाउनेसम्मका काम बाँकी नै छन्।
प्रदेश सभामा जम्मा ९७ सदस्य छन्। तर, आगन्तुकदेखि पत्रकारसम्मलाई बस्न १४४ कुर्सी राखिनेछन्। बैठकमा उनीहरूले बोल्दा हातेमाइक प्रयोग गर्नेछन्। तयारी गर्ने समयको अभाव र साँघुरो हल भएकाले छुट्टाछुट्टै माइकको व्यवस्था गर्न नसकिने खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।
साबिकका केही कार्यालयमा प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन गरिएकाले त्यहाँका कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। घाम तापेर दिन बिताउने उनीहरू नयाँ अड्डाको पर्खाइमा छन्।
प्रदेश २ः प्रदेश सभाहलको बेहाल
२१ माघमा प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको छ। प्रदेश सभा केन्द्रीय संसद्को जस्तै बनाउने बताइएको छ। तर, चार दिन बाँकी हुँदा पनि बैठक कक्ष तयार भएको छैन। भुइँमा इँटा ओछ्याएर मंगलबार ढलान गरिएको छ। जनकपुरको कुवा रामपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रको सभाहलमा बैठक बस्नेछ।
बजेट अभावका कारण आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ढिलाइ भएको छ। ५५ करोड माग गरिएकोमा सरकारले पहिलो चरणमा ७ करोड ५० लाख मात्रै पठाएको छ। प्रदेश सभाका लागि इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा २१ मर्यादापालक खटाइनेछन्। नेपाल प्रहरीका ३५ र सशस्त्र प्रहरीका करिब ५० जना खटाइनेछ। मर्यादापालकको संख्या पनि ५० पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रदेश ३ ले गर्दै
प्रदेश ३ को प्रदेश सभाको पहिलो बैठक १८ माघमा बस्दै छ। प्रदेश सभाको बैठक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा तोकिएको छ। बैठकका लागि भवनको रंगरोगन र सजावटको काम भइरहेकोे छ। बुधबार बेलुकासम्म सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न हुने प्रदेश कार्यालयका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
११० सांसद अट्ने संसद् भवन र सचिवालय तयार पार्ने काममा कर्मचारी संयन्त्र जुटेको छ। ‘११० सांसदलाई व्यवस्थित ढंगले राख्न कुर्सी व्यवस्थापन र सभाहल आकर्षक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘रंगरोगनदेखि, कार्पेट, पर्दा फेर्ने र रोस्ट्रम बनाउने काम भइरहेको छ।’